Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – फुलमाया
Dec 06, 2017 DT Admin Expressions: Poem Corner Comments Off on फुलमाया
Poet: अमिर सुन्दास
भन फुलमाया !
तिमीले दिनमा कतिवटा च्याको बोट
लगभग तिन सौ बुट्टाहरु होईन?
त्यसो भए फुलमाया,
एक दिनमा त्यही संख्यामा
टाउकहरु छिनाउने दम राख्दैनौ?
अनि के मसिनगन भन्दा
कमि छन् त बर्षौं
कलम काट्ने तिम्रो हात?
भए पनि टुक्राहरु जोड़ेर
ध्यान लाएर हेरत
कत्तिको ताकत रहेछ
जसरी लडेकी थिइन्
झम्टेको चितुवासंग च्याको गाछमुनि।
देशको कुनै च्यानलको
आँखा नपरेको बुट्टाहरु मुनिको
रक्तामे बिरताको कथा।
सयौं कुल्लिहरुको बिष्फोटक चिचयाईले
सातो उड़ेको चितुवाको कथा ।
एतवारीले दुईटा नानी च्यापेर
मातेर लास भएको ‘मरद’लाई
घरबाट तानेर जान बचाएकी थिईन
गाऊँमा दाह्रे हात्ती आउँदा।
तिम्रो आवाज दबाउनेको
गला निमोठेर हेर
खाई नखाई रुझिभिजी
पत्ति टिप्ने हात,
बुट्टा छाँट्ने हातमा कत्तिको
ताकत जम्मा भईसकेको छ।
एकदुईपल्ट खाँचो परेको बेला
अजमाएर त हेर
तिम्रो परिश्रमी हातलाई।
त्यो मैले लेखेको कविता
मैले बनाएको चित्र र
मैले गाएको च्याको गीत भन्दा
कति गुना शक्तिशाली छ
तिम्रो हात फुलमाया।
अनि पो साँच्चै
निरधक्क फुल्ने छौ तिमी
1,444,496 total views, 2,752 views today
Sandakpu – The Valley of Poison, with the Heart that Heals Holy Cross Girls H. S. School Sonada win Dr B.R Ambedkar Medha Puraskar
13,987 total views, 2,786 views today
30,200 total views, 2,787 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 30,197 total views, 2,760 views today Comments comments
30,197 total views, 2,760 views today
30,170 total views, 2,753 views today
30,178 total views, 2,758 views today